विधार्थीले आफ्नाे रिजल्टलाइ कसरी लिने ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
विध्यालय हाेस् या कलेज लेभल, विध्यार्थीलाइ परिक्षा र नतिजा विशेष हुन्छ । नतिजालाइ लिएर विध्यार्थी तनाव त भएकाे हुन्छ नै, त्यसमाथी पारिवारिक र सामाजिक दवाबले गर्दा नतिजा पछि अप्रिय घटनाहरू घट्ने पनि गर्छन् । जिन्दगी भनेकै परिक्षा, नतिजा, सिकाइ, परिक्षणहरूकाे सँगालाे हाे । याे एउटा यात्रा हाे । र याे कुरालाइ विध्यार्थी, परिवार र समाज सबैले बुझ्नु जरूरी छ ।
रक्सी नियामित प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई बिस्तारै–बिस्तारै आफ्नो कलेजो बिग्रिदै गरेको हेक्का पनि हुँदैन । कम्तीमा १० वर्षदेखि रक्सी नियमित सेवन या हप्तामा ४ दिन जसो गरेमा सिरोसिस हुन सक्छ ।दिनहुँजसो १ बोतल बियर, २ ग्लास वाइन, ६० मिली व्ह्स्किी या १ बोतल लोकल रक्सी १० वर्षदेखि खाँदै हुनुहुन्छ भने सजग हुनुस्, तपाइकाे कलेजो खराब भइसकेको हुन सक्छ ।
–मुख नमिठो हुने हुँदा मीठो पानी ९ग्लुकोज पानी, फलफूलको जुस खाने भनिएको हो । फलफूलबाट पानीको विकल्पको साथमा स्वादिलो र तागत पनि आउँछ ।किलेजोलाई असर पनि गर्दैन । उखु पेल्ने हात फोहोर छ भने फाइदा होइन उल्टो बेफाइदा बढी हुन्छ । ख्याल राख्नुपर्छ । पानी उमालेको या सफा फिल्टर गरेको हुनुपर्छ ।
– नियमित बिहानबेलुका दालभात खान मिल्छ । तरकारी बनाउनको लागि प्रयोग हुने प्याज, तेल पनि प्रयोग गर्नु हुन्छ । तेलमा फ्राइ गरेको, तेलमा तारेको, जंक खाना, मम, चाउमिन नखाने ।
– कोक, फेन्टा र प्याकेटमा पाइने खाना नखाने ।
Don't Miss it के तपाइ आफुलाइ कमजाेर महसुस गरिरहनु भएकाे छ ? एकचाेटी पढ्नुहाेस्
Up Next हरेक १० सेकेन्डमा मदिराको कारण एक जनाको मृत्यु : भयावह नतिजा